KAROOTADA "SAMSON": SHARAXAADDA IYO ASTAAMAHA NOOCYADA KALA DUWAN, QAABABKA BEERASHADA, DIB U EEGISTA, SAWIRADA - NOOCYO CAGAARAN
Ugu Weyn Ee Noocyo Cagaaran
Karootada "Samson": sharaxaad, beerid iyo daryeel
Noocyada kala duwan ee dabacasaha ee caanka ku ah suuqa gudaha, Samson waa mid aad uga fog. Wuxuu soo jiitay dareenka beeraleyda sababta oo ah dhadhankiisa wanaagsan iyo tayada ilaalinta fiican. Noo ogolow inaan eegno sifooyinka iyo astaamaha asalka.
Tilmaanta iyo astaamaha noocyada kala duwan
Karootada "Samson" waa natiijada hawsha xoolaha ee Holland ee u suurtagashay in ay helaan dalag goos goos ah oo dhexdhexaad ah. Laga soo bilaabo caleemaha ilaa bacriminta farsamo ee dabacasaha, celcelis ahaan 110-120 maalmood gudahood, inkasta oo ay bannaanka u badan soo goosan dalagyada ugu horeysay ka hor inta muddadaas. Warshadda waxaa lagu daray Diiwaanka Gobolka ee Gobolka Bartamaha 2001.
"Samson" ayaa iska leh noocyada Nantes kala duwan. Waxay leedahay rosette semi-raaxo leh iyo cagaar, saxarado caleen khafiif ah. Cawska dhirta lafdhabarta ah ee loo yaqaan 'cylindrical and leveled rooted' ayaa loo kala saaraa qiyaasta ballaadhan (oo ah celcelis ahaan 25 cm dherer), dusha sare iyo calaamad yar oo fiiqan. Midabku waa isku mid sida noocyo kale oo badan - oranji dhalaalaya. Madaxa karootada had iyo jeer waa mid isku mid ah, khadka ayaa noqon kara mid caadi ah oo yarna wareegsan. Gudaha "Samson" wadnaha yaryar oo yaryar, oo si wacan ugu xiran saxarada.
Ma taqaanaa? Karootada la kariyay ama lagu shaqeynayo hababka kale ee kuleyliyaha ayaa si sahlan u nuugaya jirka, sababtoo ah isla markiiba ka dib qaabsocodka heerarka antioxidants ayaa ku kacaya 34%.
Karootada soodhaweyntu waxay noqonaysaa heer dusha sare ee ciidda, gaaraya 125-150 g oo dhererkiisu yahay 16-30 cm Tirada ugu weyn waxay muujin kartaa xitaa 200 g.
Celcelis ahaan, laga bilaabo 1 m² of beerto, waxaa suurtogal ah in la ururiyo ilaa 5-8 kg oo karootada bislaado iyo casiir leh, dhalid taas oo ah heerka 528-762 c / ha, taas oo aad uga sareeya noocyada kale ee loo yaqaan "Nantes-4". Marka laga baxo, alaabooyinka ganacsiga waxay ka dhigan yihiin 91% ilaa 94%.
Noocyada lagu sharraxay waxay ku faantaa sifooyinka kale ee wanaagsan, kuwaas oo ah qiyaasta biqilka abuurka oo aad u sarreeya (illaa 80% oo leh geedo yaryar oo ah 3 × 15 cm) iyo caabbinta barafowga geedo, xitaa marka ay tahay -4 ° C.
Seeds of noocyo kala duwan ee karooti siinayaa sprouts gudahood dhowr todobaad ka dib markii laga beerto, inkasta oo kuwa ugu horeeya ay muuqdaan 7 maalmood ka dib. Waqtigan, waxaa lagu talinayaa in la sameeyo khafiifinta ugu horeysa.
Waa muhiim! Marka koraan Samson kala duwan, xididdada deformed ama xididdada ayaa aad u dhif ah, tirade guudna badanaa kama badna 5% wadarta goosashada.
Xaaladda noocaan oo kale ah waa sahlan tahay in la go'aamiyo mudnaanteeda, maaddaama ay si cad u muuqdaan xataa kuwa bilawga ah ee beerahooda. Marka hore, waxaa habboon in la ogaado tayada wanaagsan ee soo socda:
abuur biqilka sare, sababtoo ah hababka sare ee tiknoolajiyada helitaanka abuurka iyo ka fogaanshaha kharashyada iyo saacadaha aan loo baahnayn (sida caadiga ah, haddii aan dabacasaha uusan dhalin, waa inaad dib u samaysaa);
ku dhowaad isku mid ah dhammaan miraha laga helo natiijada koritaanka, iyaga oo siinaya bandhig fican (waxay si gaar ah muhiim ugu tahay dadka degaanka xagaaga kuwaas oo u kora dhirta ujeeda ganacsi);
goosashada caadiga ah iyo mid degganiyadoon loo eegeynin gobolka oo dalagyada xididada loo beeray iyo kuwa gaarka ah ee xaaladaha cimilada;
xasilooni wanaagsan cirridka caadiga ah ee dalladda qoyska;
dhowr khudradda xidid aan habboonayn (saboolka, ka baqdinta ama qayb ahaan kharribmay);
diiwaanka nabdoonaanta, gaar ahaan marka la tixgeliyo celceliska xilliga Bisaylkiisa ee dabacasaha (xididdadu ma lumiyaan bandhiggooda iyo hayntooda cuntooyinka dhadhanka ilaa guga).
Waa muhiim! Haddii aad goosanayso inaad beergooyska ilaaliso illaa sanadka soo socda, ku rid dabacasaha bacaha dufanka badan. Inta u dhaxaysa lakabyada dalagyada xidid waa inay noqdaan lakab oo diirka basasha qalalan. Bacaha la buuxiyay waa in si adag loo xirxiraa oo lagu dhejiyaa qallalan aan saldhig lahayn oo qabooban xilliga jiilaalka.
Si ka duwan noocyo badan oo kale oo dabacasaha ah, "Xayawaanka" xididada kama soo baxaan dusha sare, iyo waqtiga oo dhan ee dhulka ku yaala godka. Thanks to feature this, taajkii waa joogto ah orange iyo marna u noqdaan cagaaran.
Haddii aan ka hadalno dhibaatooyinka, markaa wixii la aqoonsan karo waa dhibaatada soo iibsiga miraha yar ee dukaamada yaryar iyo kharashkoodu sarreeyo, inkasta oo aad xallili kartid dhibaatadan adigoo la xiriiraya dukaamada internetka oo alaabadooda u soo diraya boostada.
Sida laga soo xigtay warshadaha iyo sida ay ufaraxsan yihiin bannaanka u badan, karootada ugu fiican "Samson" waxay siin doontaa dhalashada carrada dillaacsan, dhajis kala duwan ama dhismaha bacaadka leh. Xaaladaha intooda badan, beerashada noocyada kala duwan ayaa lagu sameeyaa bartamaha guga, inkasta oo xaaladaha qaarkood ay ku haboontahay in la beero inta ka horeysa xilliga jiilaalka, bilowga Nofembar, marka ay durbadiiba qabow tahay, heerkulna wuxuu hoos u dhacay +5 ° C
Ka mid ah cayayaanka caadiga ah ee dabacasaha waa in la xusaa duqsiyada dabacasaha, nematodes, wireworms, Medvedka, jiir, aphids.
Xaalad labaad, waxaa loo oggol yahay in ay beerto xitaa qoyaan fudud oo la qaboojiyey, rusheeyaa abuurka leh isku dhafka peat ama humus (wax beerto) waxaa sii qoto dheer 1-2 cm oo leh qoto dheer oo ah furrow 20 cm). Ma'aha lagama maarmaan in si adag loo dhigo ciidda, waa ku filan inaad ku dhaqantid iyo mulch yar yar si aan qolof lahayn.
Marka la eego xaqiiqda ah in miraha Dutch ay ku sifoobeen biqilka sii kordhaya, waxay u baahan yihiin in la beeraa yar ka badan noocyo joogto ah. Kala xulashada abuurka ee saliideedka, habka dareeraha ah, oo ay la socdaan ciid ama miraha qaabka loo yaqaan 'dragees', ayaa si fiican u shaqeynaya.
Haddii aad sameyso beereed qaro weyn, ka dibna caleemaha mustaqbalka waa in la qalajiyo, ka dib habka labaad ee dhexda dabacasaha ku dhow waa in aan ka yarayn 5-7 cm, haddii kale miraha waxay noqdaan kuwo la bedelay oo korodhay. Qoyaanka dhirta ah ayaa ku caawin doona kor u qaadida madaxyada dalagyada xididada. Kobcinta wanaagsan iyo horumarka ah ee karootiga oo idil, waxaa muhiim ah in la helo cunto caafimaad leh oo korodhsan xilliga koritaanka, iyo Samson kala duwan ma aha mid ka reeban xaaladdan. Tani waxay ka dhigan tahay in labada waraabinta iyo bacariminta labadaba loo sameeyo si joogto ah, iyo si loo ilaaliyo qoyaanka ciidda ka dheer, waxaa lagu dhejin karaa haraaga dhirta, caws iyo dhadday.
Daryeelidda noocyo kala duwan oo ah "Samson" waxay ku lug leedahay manuucyada isku midka ah sida beerista noocyo kale oo karooti ah, qaybaha ugu muhiimsan ee geeddi-socodkuna wuxuu noqonayaa mid si joogto ah u waraabinaya iyo quudin ku habboon.
Ma taqaanaa? Marka laga soo tago faa'iidooyinka kale, dabacasaha ayaa sidoo kale leh qaar ka mid ah bogsashada bogga, maadaama ay awoodaan in ay kor u qaadaan heerka calcium ee dhiiga bini-aadamka, isla markaana yareynaya xaddiga kolestaroolka. Taasi waa sababta ay dhakhaatiirtu ugu talinayaan inay cunaan qaar ka mid ah cudurrada dhaxalka ah iyo cudurrada nidaamka wadnaha.
Karootada waaweyn oo la kariyey, taas oo ah noocyada kala duwan, ayaa aad u jecel qoyaanka, taas oo macnaheedu yahay in waraabinta waa inay noqotaa mid joogto ah. Intaa waxaa dheer, si looga fogaado muuqaalka qolof ah dusha sare, ka dib markii codsi kasta oo dareere ah, carrada u dhexeeya saf ah waa in la furo.
Celcelis ahaan, waraabinta waxaa la sameeyaa maalin kasta oo kale, iyo inta lagu jiro xilliyo gaar ah oo addeec ah - maalin kasta. Laba ilaa saddex asbuuc ka hor inta aan la goostin dalagyada xididka ah, hordhaca ah ee dareeraha ah ayaa gebi ahaanba la joojiyay, haddii kale karootiga lama kaydin doono si xun oo ugu dhakhsaha badan wuxuu bilaabi doonaa inuu jabo.
Ka mid ah cudurada suurtogalka ah ee dabacasaha waa in ay ka digtoonaadaan kallana madow, kalluunka cas, caarada budada ah, cercosporosis, rhizoctoniosis.
Kala duwan ee "Samson" waxaa lagula talinayaa inay si khaas ah loogu quudiyo Bacriminta macdanta, hannaankani saddex ama afar jeer inta lagu jiro xilliga sii kordhaya ee dhirta.
Quudinta koowaad waxaa la sameeyaa bisha Juun waxayna ku lug leedahay isticmaalka xeryaha nitrogen, iyo dhammaan kuwa soo socda waxay u baahan yihiin jiritaanka Bacriminta potash. Markii ugu danbeysay ee ciidda la bacrimiyo bil ka hor goosashada.
In kasta oo xaqiiqda ah, in ra'yiga bahalka badan, isku dhafka dabiiciga ah ayaa horseedaya dallad dalagyada xididada (gaar ahaan marka digriiga digaaga ama dooxada mullein ah lagu daro ciidda), qaar ka mid ah dadka degaanka xagaaga wali waxay isticmaalaan.
Tusaale ahaan, oo lagu qasi jiray saamiga 1: 15 digaaggu, dhirta waxaa lagu shubay Juun iyo Julaay. Xaq ama khaldan - qof walba oo degan xagaaga ayaa go'aan ka gaari kara, laakiin ha iloobin koritaanka xad-dhaafka ah ee cagaarka, taas oo ah mid aad u caadi ah ka dib isticmaalka joogtada ah ee maaddada organic. Isla mar ahaantaana, qoraallada macdanta ayaa diiradda saaraya horumarinta nidaamka asaasiga ah, kiiskuna waa xididka.
Way adag tahay in la helo degganaha xagaaga, ka dib markii uu sii kordhayo noocyada kala duwan ee la soo sheegay, waxay noqon laheyd mid aan ku faraxsanayn natiijada ugu dambeysa, dabcan, haddii beerashada iyo daryeelka lagu fuliyay si waafaqsan sharciyada oo idil. Ku dhowaad dhammaan beeralayda iyo beeraleydu waxay ku midoobeen dib-u-eegitaan wanaagsan oo ku saabsan mawduucan, iyaga oo muujinaya sicirka suuq-geynta ee dalagyada xididada, hodanka iyo dhadhanka wanaagsan.
Asal ahaan, karootada noocan oo kale ah ayaa loo isticmaalaa samaynta casiirka, baradhada la shiiday, noocyada kala duwan ee cuntooyinka qasacadaysan iyo suxuunta kale, iyo suurtogalnimada suurta galnimada kaydinteeda muddada fog iyo cusub, waxaad u isticmaali kartaa inta badan sanadka.
Sida aad u arki karto, sharaxaadda iyo astaamaha dabacasaha "Samson" waa sabab fiican oo lagu isku dayo inuu abuuro khudradda cagaarka ah ee ku yaala goobtaada, iyo goorta iyo sida loo sameeyo, waxaad ogaatay.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyo Cagaaran 2019